ကြားဘူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၈) - Myanmar Network
ကြားဘူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၈)
Posted by Language Republic on February 5, 2015 at 16:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီနေ့ အပိုင်း (၈) မှာတော့ tears နဲ့ cry ပါဝင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းအချို့၏ အဓိပ္ပါယ်၊ သမိုင်းနှင့် ဥပမာများကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။
"Tears" and "Cry"
မျက်ရည်ကျတိုင်းငိုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလား။ ငိုတိုင်းလည်းမျက်ရည်ကျပါသလား။ လောကကြီးမှာ တစ်ချို့သောစကားတွေက နောက်ကွယ်ကအဓ်ိပ္ပါယ် ‘inner meaning’ တွေနဲ့ speech ဆိုတဲ့ နှုတ်ထွက်စကားတွေကို တန်ဆာဆင်ပေးပါတယ်။ စကားကြွယ်သူတွေရဲ့ ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်လို့ ခေါ်မလားဘဲ။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာ tears တို့ cry တို့နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ non-native speaker တွေ မဟုတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများ အတွက် ကတော့ tears တို့ cry တို့စတဲ့ စကားလုံးတွေကို တွေ့ရကြားရတာနဲ့ ငိုကြွေး ဝမ်းနည်းခြင်း တွေနဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်မှာ သေချာပါတယ်။ အဲ့ဒီ ခံစားချက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မနီးစပ်တဲ့ အသုံး တစ်ချို့ကိုဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီ expression က ဟန်ဆောင်ငိုကြွေးတယ် သို့မဟုတ် ပူဆွေးသောက ဖြစ်ဟန်ဆောင်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒါက မိချောင်းဆိုတဲ့ crocodile နဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုန်းလို့ မေးလာရင်တော့ မိချောင်းတွေဟာ မိမိရဲ့ သားကောင်ကို မျိုချတဲ့အခါ မျက်ရည် ပေါက်ပေါက် ကျတတ်တယ် ဆိုတာကြောင့်ပါ။ ဘာကြောင့် မျက်ရည်ကျရသလဲ။ ဒါကတော့ စဉ်းစားကြည့်လို့ ရပါတယ်။ မိမိမျိုချနေတဲ့ သားကောင်မှာ အရိုးတွေ၊ ဆူးတွေ၊ အတောင်တွေ ရှိတော့ အဲ့ဒါကြီးက လည်မျိုမှာနင်နေတဲ့အခါ အနှီမိချောင်းလည်း အနည်းနဲ့ အများ discomfort မသက်မသာ ဖြစ်မှာသေချာတာပေါ့။ ဒါရဲ့ reaction ကြောင့် မျက်ရည်ကျတာ။ ကိုယ်စားနေတဲ့ သားကောင်ကို ရုတ်တရက် သနားလာပြီး ငိုမိတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပေါင်။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ မျက်ရည်ကျရတဲ့ နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုက ရေထဲမှာ အနေများတဲ့ မိချောင်းဟာ သားကောင်ကို ကုန်းပေါ်မှာ ဝါးမျိုနေစဉ်မှာ ကုန်းပေါ်မှာ အချိန်ကြာကြာ နေရတဲ့အခါ မိမိမျက်လုံးတွေ ခြောက်သွေ့ မသွားအောင် စိုစွတ်နေအောင် lubricate လုပ်ဖို့အတွက် မျက်ရည်နဲ့ တူတဲ့ အရည်တစ်မျိုးကို ညှစ်ထုတ်လေ့ ရှိပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီလို မျက်ရည်ကျတာကို ဟန်ဆောင် ဝမ်းနည်းတာနဲ့ နှိုင်းတာ ကွက်တိကို ဖြစ်နေတာဘဲနော်။
ဒီ အသုံးကို ဟိုးရှေးရှေးတုန်း ကတည်းက Shakespeare က သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော် ပြဇာတ်၂ ခုဖြစ်တဲ့ Henery VI နဲ့ Othello မှာသုံးခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ရိုက် မဟုတ်ပေမဲ့ မိချောင်းကို ဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ဒီလိုိတင်စား ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
With sorrow snares velenting passangers…
(ပူဆွေးသောကရောက်နေသူတစ်ဦးကဲ့သို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဟန်ဆောင် အယုံသွင်းသည်။)
ဒီ expression ကတော့ ဖြစ်ပြီးသား ကိစ္စတစ်ခုအပေါ်၊ ဘာမှလည်းလုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အခြေအနေကျမှ၊ ငြီးတွား မြည်တွန် တောက်တီး နေတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ဒီ expression ကိုပြောတဲ့ အခါသူရဲ့ မူလ proverb အတိုင်း "It’s no use crying over spilled milk." လို့ ပြောကြတာများပါတယ်။ ဒီ expression ပေါ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ Wording တွေလည်း အမျိုးမျိုး ကွဲပြားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာမှာ spilled အစား shed လို့ သုံးတာမျိုး crying နေရာမှာ weeping သို့မဟုတ် sighing သုံးတာမျိုးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေကိုအခုမှ လာငြီးပြမနေနဲ့တော့” ဆိုပြီးအတူတူဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Somerset Maugham က သူ့ရဲ့ Of Human Bondage (၁၉၁၅) ဝတ္ထုထဲမှာ ဘဝနဲ့ ဆိုင်တဲ့ တွေးစရာလေး တစ်ခုက်ို ဒီလိုရေးခဲ့ပါတယ်။
“It’s no good crying over spilt milk, because all the forces of the universe were bent on spilling it.” တဲ့။
(ဖြစ်ဖိှု့ရှိတာတွေ ဖြစ်ကို ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် သောကရောက်နေရင် အပိုပါဘဲပေါ့။)
ဒီ idiom ကတော့ နေ့စဉ်သုံး စကားတွေမှာ ကြားခဲ့ရတဲ့expression ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီ expression ဘယ်က လာသလဲဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အတိအကျကိုပြောဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ၆ ရာစု လောက်ကရေးခဲ့တဲ့ Aesop’s Fables ဆိုတဲ့ အီစွတ်ပုံပြင်များထဲက ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကနေ လာတာပါ။ ပုံပြင်ကတော့ ဒီလိုပါ။ သိုးကျောင်းသားငယ်ကလေးတစ်ဦးဟာ ရွာပြင်ထွက်ပြီး သိုးကျောင်းရင်း ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ဝံပုလွေတွေ လာနေပြီ “wolf!” “wolf!” လို့ အသံကုန် အော်သတဲ့။ ရွာသားတွေက ကြားတော့ ဝိုင်းကူရအောင် ပြေးထွက်လာကြတော့ ဘာမှလည်းမဟုတ် နောက်ပြီး အော်လိုက် တာကိုသိကြရတယ်။ သိုးကျောင်းသားကတော့ သူနောက်တာ ခံလိုက်ရတာကို ကြည့်ပြီးဟားသတဲ့။ အဲ့ဒီနောက် ဒီလိုဘဲနောက်ထပ် “wolf!” “wolf!” လို့ အော်ပြီး နောက်ပြန်သတဲ့။ လုပ်ဖန်များလာတော့ ရွာသားတွေလည်း သူ့အော်သံကို ဂရုမစိုက်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်ဆုံးမတော့ တစ်ကယ်ဘဲဝံပုလွေတွေ ရောက်လာလို့ အော်ပြီး အကူအညီလည်းတောင်းရော ဘယ်သူမှ ကူဖို့ ရောက်မလာတော့ဘဲ သူ့သိုးတွေအားလုံးကို ဝံပုလွေတွေက သတ်ဖြတ် စားသောက်ပစ်လိုက်တာ ခံလိုက်ရတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီတော့ cry wolf ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ စဉ်းစား ကြည့်နိုင်ပြီပေါ့။ မဟုတ်တန်းလျား ဟန်ဆောင် အကူအညီတောင်းပြီး လူတွေကိုဒုက္ခပေးတာကိုခေါ်တာပေါ့နော်။ တစ်ကယ် အကူအညီလိုတဲ့အခါ ဘယ်သူကမှ ကူညီကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
If you cry wolf, nobody will believe you when you actually need help.
She had repeatedly rung the police for trivialreasons and perhaps she had cried wolf too often.
Ref: As right as rain
Permalink Reply by Aung Win Naing on February 6, 2015 at 15:09